पोखरा Archives - Dna Nepal
पोखराका लक्ष्मणः जसले आफ्नो सुविधाको गाडी किनेनन्, कलेजलाई किनिदिए ३१ जेष्ठ २०७९, मंगलवार १२:१०
पोखरा, जेठ ३१ । पोखरा महानगरपालिकाले लेखनाथमा बहुप्राविधिक शिक्षालय सन्चालन गरेको छ । ३ वर्षअघि सुरु भएको शिक्षालयमा अटोमोवाइल र सिभिल इन्जिनियरिङको पढाइ भैरहेको छ । विपन्न विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरेर सन्चालनमा ल्याइएको शिक्षालयमा..
पोखरा महानगरको ल्याण्डफिल ३३ नम्बर वडामा सारिने २७ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार ११:५७
पोखरा, २७ जेठ । पोखरा महानगरपालिकाको ल्याण्डफिल साइट ३३ नम्बर वडामा सार्ने निर्णय गरिएको छ । योसँगै महानगरले केही महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । निर्णयहरुः १. पोखरामा एक वर्षभित्रमा विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने निर्णय गर्दै..
हिमालय मा.वि. मौजाको ४९ औ वार्षिकोत्सव सम्पन्न ११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार ११:५०
पोखरा ११ फागुन । हिमालय मावि मौजाको ४९ औ वार्षिकोत्सव सम्पन्न भएको छ । पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २० मौजामा रहेको हिमालय माविको ४९ औ वार्षिकोत्सव, पुरस्कार वितरण तथा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम मंगलवार सम्पन्न भएको हो । वार्षिकोत्सवको..
पोखरा होराइजन डेन्टल क्लिनिकमा वृद्धवृद्धा, अशहाय र अपांगता भएकालाई ७५ प्रतिशत सम्म छुट १० फाल्गुन २०७७, सोमबार १२:२०
पोखरा १० फागुन । पोखराको अमरसिंहचोकमा भर्खरै सञ्चालनमा आएको पोखरा होराइजन डेन्टल क्लिनिकले वृद्धवृद्धा, अशहाय र अपांगता भएकालाई १५ देखी ७५ प्रतिशत छुट दिने भएको छ । दांत सम्बन्धी अत्याधुनिक मेसिनबाट उपचार गराउने उद्देश्यले सोमबारदेखी..
नेलम्बो नेपालद्धारा पोखरा २० का सामुदायिक विद्यालयलाई स्वास्थ्य सामाग्री वितरण ९ फाल्गुन २०७७, आईतवार १४:१२
पोखरा ९ फागुन । नेलम्बो नेपालले पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २० मा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुमा स्वास्थ्य सामाग्री वितरण गरेको छ । वडा नम्बर २० भित्र रहेको २ वटा मावि र ८ वटा आधारभुत गरी १० वटा सामुदायिक विद्यालयहरु र वडा कार्यलयलाई कोभिड १९..
पोखराको पार्किङले व्यवसायीलाई तनाव, नागरिकलाई सास्ती ८ फाल्गुन २०७७, शनिबार १०:२१
पोखरा, फागुन ८ । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले पोखराको पार्किङ समस्या सुल्झाउनको लागि उद्योगी÷व्यवसायीबाट सुझाव संकलन सुरु गरेको छ । संघको फुटपाथ तथा बजार व्यवस्थापन उपसमितिको आयोजनामा बिहीबार भएको कार्यक्रममा बोल्दै संघका अध्यक्ष नारायण..
युनाईटेड क्लवद्धारा ताङतिङका ५३ विद्यार्थीलाई न्यानो कपडा वितरण २२ माघ २०७७, बिहीबार ११:३०
पोखरा २२ माघ । युनाईटेड क्लव पोखराले कास्कीको मादी गाउपालिका ताङतिङमा रहेको श्री हिमालय मिलन माध्यामिक विद्यालयमा अन्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई न्यानो कपडा वितरण गरेको छ । क्लवको शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत मादी गाउपालिका वडा नम्बर २ मा रहेको..
लेकसाइडमा सिसी क्यामरा राखिने २० पुष २०७७, सोमबार १३:३२
पोखरा, पुस २० । पोखराको लेकसाइड क्षेत्रको सडक छेउमा जडित सिसी क्यामरा मर्मत सम्भारका लागि पोखरा पर्यटन परिषद् र स्काई लिङ्क टेक्नोलोजीविच एक वर्षे सम्झौता भएको छ । सम्झौता पत्रमा पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराई र स्काई..
नारायण कोइराला प्यानलको घरदैलो सुरु १६ पुष २०७७, बिहीबार ०२:०६
पोखरा, पुस १६ । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको ३३ औं महाधिवेसनमा प्यानल घोषणा गरेर चुनावमा होमिएको नारायण कोइरालाको टोलीले घरदैलो सुरु गरेको छ । पोखराको लामाचौरबाट बुधबार विहानदेखि घरदैलो सुरु गरिएको हो । लामाचौर, बाटुलेचौर, बगर, विन्ध्यवासिनी..
स्वतन्त्र समूह लिएर विन्दु कोइराला संघको चुनावमा
पोखरा, पुस १६ । पोखरा ।पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको आसन्न ३३ औं महाधिवेशनका लागि अध्यक्षका उमेदवार विन्दु कोइराला सुवेदीले स्वतन्त्र समूह घोषणा गरेर चुनावमा होमिएकी छिन् । बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी सुवेदीले आफ्नो समूहको नाम र उम्मेदवार घोषणा..